पोर्चुगलको भद्रगोल एनआरएन :: Setopati
पोर्चुगलको भद्रगोल एनआरएन
गैर आवासिय नेपाली संघको परिभाषा भित्र राजनीतीक पर्दैन तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा यसलाई राजनीतीकरण गरिन्छ। विदेशमा छरिएर रहेको तमाम नेपालीहरुको साझा संगठन हो एनआरएन। यसलाई राजनीतीक आखांले हेरियो भने यो एनआरएन रहदैन।
कुनै दलको भातृसंगठनको रुपमा परिभाषीत गर्नु अन्यथा नहोला। संसारका कुनै पनि देशमा रहेको यो संघ राजनितीक हस्तक्षेपवाट उन्मुक्ती भएको छैन। चाहे त्यो अमेरीका होस ,युरोप होस अष्ट्रेलिया होस, जापान, कतार जहांसुकै होस। एनआरएन भित्र राजनीती घुसेकै हुन्छ। कसैले यो दावीलाई अस्विकार गर्छ भने त्यो मान्य हुनै सक्दैन। प्रश्न अभियान्ताहरु उपेन्द्र महत्तो, जीवा लामीछाने, शेष घलेलाई के यसको शुरुवात राजनीतीक अभिप्रेरित थियो वा पछि बनाइयो? अझै अहिले त एनआरएनमा जातीय, भेगीयरुपमा यसलाई हेर्न थालिएको छ। के तपाईले शुरुवात गर्दा यसैलाई आधार बनाउनु भएको थियो? यसको उत्तर दिने वेला भएको छ अभियान्ताहरुले। किन नेपाली समाज रहेको देशमा एनआरएन अहिले सामान्य नागरिकको लागि चासो भित्र बस्न सकेन?
प्रसग्ग पोर्चुगलको गैर आवासिय नेपाली संघ पोर्चुगलको नेतृत्वको लागि पहिलो पल्ट निर्वाचन हुदैछ। प्रमुख पार्टीको भातृ संगठनहरु सहमतीमा पुगे पनि मनोनयन दर्ता सम्म आइपुग्दा सहमति हुन सकेन। नेपाली काग्रेस, एमाले र माओवादी वीच नयांकार्यकसमितीको लागि सहमती भएको थियो।
असन्तुष्ट पक्षले अर्काे प्यानल खडा गरेपछि सो सहमती पनि भाडिएको छ। जसका कारण पहिलो पल्ट पोर्चुगलको इतिहासमा एनआरएनको निर्वाचन हुदैछ। निर्वाचनको लागि विभीन्न पदमा मनोनयन दर्ता भइसकेको छ भने भोटर लिष्ट सार्वजनीक गरिएको छ। यहि सेम्टेम्बर १० मा निर्वाचनको तयारी गरिएको छ। जातीय र राजनितीक भागभण्डाको विरुद्द भन्दै प्रमुख पार्टी भन्दा बाहिर वाट नेतृत्व दावी गरिएको हो।
यस अघि सहमतीमा विभीन्न दलका प्रतिनिधीहरुले एनआरएन पोर्चुगलको नेतृत्व समाल्दै आएका थिए। एनआरएनको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा मतदाताहरु प्राय वेखबर छन्। पदको लागि हानथाप हुदै गर्दा मतदाताहरुलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउने तर्फ कसैको चासो गएको देखिदैन। यो वा त्यो हालतमा नेतृत्व लिन खोज्ने तर सामान्य नेपालीहरु वीच परिचय समेत नभएका व्यक्तिहरु यसपाली निर्वाचनको दौडमा देखिएका छन्।
सामाजीक सञ्चालमा मार्फत उम्मेवारी घोषणा गर्नेहरु को जमात बढी छ। अझै सामाजीक सञ्जाल मार्फत आरोप प्रत्यारोप गर्नेहरुको भिड नै छ। एनआरएन पोर्चुगलको निर्वाचनलाई नजिकवाट निहालीरहेका केहि वौद्दिक व्यक्तिहरुले यसलाई इगोको निर्वाचनमा रुपमा हेरेका छन्। सहि नेतृत्व चयनको लागि निर्वाचन नै उत्तम विकल्प हो तर त्यसको लागि आम नेपालीहरुको प्रतिनिधत्व गर्नेले संस्थाको नेतृत्व गर्नु पर्छ पत्रकार दिनेश पोख्रलले भने पोर्चुगलमा बस्ने धेरै नेपालीहरुलाई एनआरएन प्रति वितृष्णा छ उनिहरु वेवास्ता गरेका छन्। निर्वाचन उनिहरुको चासोको विषय बन्न सक्नु पथ्र्या तर त्यो देखिदैन।
अझै रोचक पक्ष के छ भने पोर्चुगलमा वीसहजार भन्दा बढी नेपालीहरुको वसोवास रहेको दावी गरिएको छ। तर भोटर लिष्ट जम्मा २ हजार ३ सय ४५ जनाको नाम समावेश गरिएको छ। दावी गरिएको २० हजार नेपालीहरु मध्ये वाकी लाई किन एनआरएनमा समावेश गर्न सकिएन वा किन उनिहरुले सहभागिता जनाउने चाहेनन्।
खोजीको विषय र प्राथामिकता कसैको बनेन। बन्यो त केवल पदको लागि लुछाचुडी। रातारात लिस्वनको खुल्ला चौरमा सहमतीको लागि बैठक बस्छ। फलानो पार्टीको त फलानो पार्टी वाट म भन्नको लागि तछाड मछाड गरिन्छ। यसपाली तेरो पालो अर्काे मेरो पालो भन्दै खुल्ला चौरमा दलका नेताहरु वोलेको पार्क घुम्न आउने नेपालीहरुको कानमा पर्छ तर त्यहि घुमन्ते नेपालीलाई एनआरएनको वारेमा थाहा हुदैन। पैसा तीरेर एनआरएनको सदस्यता लिनको लागि टोली गठन गरिन्छ, फर्म भर्नको लागि प्रतिनिधीलाई प्रशिक्षण दिइन्छ, फोन गरेर आग्रह गरेर भोटको लागि कृतिम हासो छरिन्छ तर संघको कार्य योजना वारे जानकारी दिइदैन्। फेसवुकका भित्ताहरुमा चुनावी नाराले रंगिन बनाइन्छ त्यो रंग भित्र नेपाली समुदाय लागि गरिएको र गरिने कामहरु भन्दा आरोप र आपेक्ष हुन्छ।
तर सामान्य नेपालीहरुको पहुचको विषय प्राथामिकतामा पर्दैन। पदकै लागि रेष्टुरेष्टमा महग्गो महग्गो वीस्कीका वोटलहरु फोरिन्छ, नेपालीहरु वीच जातजातीको नारा दिइन्छ, भौगोलिकरुपमा नेपालीहरुलाई विभाजन गर्न खोजीन्छ तर त्यहि नेपालीलाई एनआरएनको छाता भित्र आवद्द गर्न सकिदैन।
कुनै पनि पार्टीको निर्वाचनमा मार्तीमुनिज तिर सदस्यको लागि फर्मभर्न विना पैसा पार्टीको हुलियाहरु बजार, चोक चोकमा छोडिन्छ। सदस्यता बनाएको आधारमा पार्टीमा उच्च मुल्याडकन गर्दै पदको लालीपप दिइन्छ तर एनआरएनको लागि पहल गरिदैन।
स्पष्ट छ पार्टीको हनुमान हुन सके एनआरएनको भाग पनि पाइन्छ। हो यहि मनोदशाले गाजेको छ पोर्चुगलमा। नेपालमा स्वतन्त्र भएकाहरु पनि ठुलै भाग पाउने हो की भन्दै बिभिन्न पार्टीको सदस्यता लिने गरेका छन्।
विश्व भर छरिएर रहेको तमाम नेपालीहरुको छाता संगठन गैर आवासिय नेपाली संघको हिस्सा बनेको पोर्चुगलको एनआरएन संस्था सधै विवाद र झगडामा अल्मिलिरह्यो। दलिय, भेगिय, जातिय मनोविज्ञानले विक्षिप्त छ पोर्चुगलको नेपाली समाज। देश छोडेर आए पनि हामीले हाम्रो कुसंस्कार छोड्न सकेनौ नेपालीले नेपालीलाई नेपाली भएर होइन राजनिती, जाती र क्षेत्रको आधारमा हेर्ने गरियो एनआरएन पोर्चुगलका युवा संयोजक प्रितम गुरुडले भने मुलत नेपालीले नेपालीलाई हेर्ने आखां नेपालीनै हुनु पर्छ अन्यथा वर्र्षाै सम्म पनि हामी आफ्नै वाट हेपाहा दृष्किोणले वाचीरहनु पर्छ।
पोर्चुगलमा अहिले चुनावी सरगर्मी वढेको छ। मतदाता कमै भए पनि राजधानी लिस्वनमा नेपालीहरु वीच चिया गफ बनेको छ यसपालीको निर्वाचन। अघिल्लो निर्वाचन सहमती हुन्थ्यौ कार्यसमिती बने पछि मात्र सामान्य नेपालीले थाहा पाउने थिए।
यसपाली निर्वाचन हुने भएकोले गर्दा केहि धेरै नेपाली हरु वीच चर्चा चल्नु सामान्य हो। यहां रहेको दलका भातृसंगठनले सहमती गर्ने निणर्य गरेको केहिवेरमा दलभित्र असन्तुष्टि देखाउदै उम्मेवार घोषणा गरिन्छ। अझै दलको भातृसंगठनको नेतृत्वमा आउन चाहने व्यक्तिलाई एनआरएनको पदको लोभ देखाउदै पाखा लगाइन्छ। संघको अन्तराष्ट्रिय सदस्य बनाउने भन्दै तुरुप फ्याकिन्छ। के कुनै पार्टीमा कसैको भागवण्डा नमिले पछिको विकल्प एनआरएन हो? एनआरएन कसैको पेवाहो?
नेपाली समाज रहेको अधिकाशं देशमा यो चल्दै आएको। पोर्चुगल पनि यसवाट भिन्न छैन। पोर्चुगलमा सन २००६ वाट एनआरएन संस्थागत रुपमा संगठीत भएको हो। यसअधिका सबै कार्यसमिती सहमतीमा हुदै आएका थिए। यसको मतलव सदस्यताको हिसावले दलहरुले भागबण्डा लगाउदै आएका थिए। तर यस पल्ट प्रमुख दलहरुले सबैलाई समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष निर्वाचनमा होमीएको हो। यसको बुझ्नु पर्ने पक्ष के हो भने यदी सवै दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई भागवण्डा पुगेको भए सायद निर्वाचनको प्रसग्ग उठ्ने थिएन। वाहिर नेपालीहरुको हित गर्ने विषयमा जति प्रतिवद्दता जनाए पनि अन्तिम विन्दु पद नै हो पोर्चुगलका नेपाली समुदायले चिनेको र देखेको एनआरएन यहि हो।
सामुन्द्रिक बन्दरगाहांको हिसावले युरोपको सबै भन्दा बलियो देश पोर्चुगल। युरोपमा अन्य देशहरुमा भन्दा पर्यटकहरुको लागि आर्कर्षीत देश। अमेरीका संग सामुद्रिक सीमानामा रहेको पोर्चुगलसंग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो छैन। सन १९७६ सेम्टेम्बर १ देखि नेपाल र पोर्चुगलको कुटनितीक सम्बन्ध रहेको हो र नेपाली हरु विधीवत रुपमा सन १९९१ देखि बस्दै आएका छन्।
नेपालीहरुको संख्या दिनहु बढ्दै गएको छ। यसरी नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गए पनि नेपालीहरुले अभिभावकको रुपमा एनआरएनलाई पाउन सकेका छैनन्। आफुले नेपालीहरुको हितमा सक्दो सहयोग गरेको र नेपालीहरुलाई एनआरएनको पहुचं भित्र ल्याउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको विगत र वर्तमानका एनआरएन पोर्चुगलका अध्यक्षहरुले बताए पनि ग्राससुटका नेपाली समुदाय र व्यक्तिको लागि एनआरएन अहिले पनि हुने खानेको संस्था भनेर परिचित रहेको छ। आशा गरौ भावी नेतृत्वले कमसे कम यहांका नेपालीहरुलाई संघको गर्वीलो छाता बनेर एक सुत्रमा वाध्न सकोस।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १९, २०७४, १५:४४:२७
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्ने नेपाल बारको पनि तयारी
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै मागे प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा
प्रधानन्यायाधीशबारे छलफल गर्न १४ जना न्यायाधीश कसरी जुटे एकै ठाउँमा?
एक साता लम्बियो प्रदेश १ मा आचार्य नेतृत्वको सरकार
खप्तडलाई माया गर्नेहरूको कथा
कर्णालीमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री छोड्न प्रचण्डको निर्णय कुर्दै माओवादी
सेयर बजारमा २७ अंकको वृद्धि
प्रधानन्यायाधीश राणाबारे धारणा बनाउन सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको छलफल
प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा खोजेको विषय टुंग्याउन भोलि फुलकोर्ट र नेपाल बारको संयुक्त बैठक
'तिमीलाई गुमाउन चाहन्नँ' विकल्प न्यौपाने
मेरो सिन्दुर बिनोद ढकाल
मूकदर्शक म राधाकृष्ण पन्त 'राकृप'
लाज किन बाबा! मणिराज अधिकारी